पहिलो पुनर्बिमा कम्पनी सञ्चालनमा - Artha ko Artha
पहिलो पुनर्बिमा कम्पनी सञ्चालनमा	Featured
पुनर्बिमा कम्पनीको उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री महत
काठमाडौं, ८ पौष । नेपालको पहिलो पुनर्बिमा कम्पनी नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेड सोमबारदेखि औपचारिक रुपमा सञ्चालनमा आएको छ । द्वन्द्वका समयमा आतंकवादी क्रियाकलापबाट हुनसक्ने क्षति ढाक्नका लागि २०६० सालमा स्थापना गरिएको आकस्मिक बीमा कोषलाई पुनर्बिमा कम्पनीमा परिण गरिएको हो । पुनर्बिमा कम्पनीको स्थापनाले देशबाट पुनर्बिमाका लागि बाहिरिने ठूलो रकम स्वदेशमै रहने बताइएको छ ।
पुनर्बिमा कम्पनीको उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले देशभित्रै पुनर्बिमा कम्पनी स्थापना भएकाले पुनर्बिमाको प्रिमियम स्वरुप ठूलो परिमाणमा बाहिरिरहेको रकम नियन्त्रण हुने उल्लेख गरे । नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा १७ निर्जिवन बीमा कम्पनीको ८५ करोड रुपैयाँ लगानी रहेको छ । कुल चुक्ता पुँजी दुई अर्ब एक करोड रुपैयाँ रहेको यस कम्पनीमा सरकारको ४३ प्रतिशत र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको ३९ प्रतिशत सेयर रहेको छ ।
जारी पुँजी तीन अर्ब रुपैयाँ रहेको यो कम्पनीको १८ प्रतिशत सेयर जीवन बीमा कम्पनीहरुका लागि छुट्याइएको हो । त्यस्तै, नागरिक लगानी कोष तथा कर्मचारी सञ्चय कोषले पनि मुलुकको पहिलो पुनर्बिमा कम्पनीको सेयर स्वामित्व लिन चाहेकाले निकट भविष्यमै जारी पुँजी पाँच अर्ब रुपैयाँ पु¥याइने बताइएको छ ।
“खासगरी सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकामा भएको आतंकवादी हमलापछि विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीहरुले आतंकवादी क्रियाकलापका क्षतिमा पुनर्बिमा गर्न छाडेपछि निर्जिवन बीमा कम्पनी र सरकारको संयुक्त लगानीमा आकस्मिक बीमा कोष स्थापना गरियो, त्यही नै यस पुनर्बिमा कम्पनीको सुरुवात बिन्दू हो,” कम्पनीको उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री महतले भने ।
अर्थमन्त्रीले पुनर्बिमा कम्पनी सञ्चालनका लागि विशेष दक्षता आवश्यक भएकाले विदेशी कम्पनीहरुसँगको सहकार्यमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपालबाट पुनर्बिमाका लागि बाहिरिने रकमको १५–२० प्रतिशत स्वदेशी पुनर्बिमा कम्पनीमा नै हुन सक्ने उनको भनाई छ । बीमा कम्पनीहरुले जोखिम विविधिकरणका लागि विभिन्न पुनर्बिमा कम्पनीहरुमा बीमा गराउने गर्छन् ।
बीमा कम्पनीहरुका अनुसार उनीहरुले आगामी चैतसम्मका लागि विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीहरुसँग सम्झौता गरिसकेकाले त्यसपछि नेपाली कम्पनीसँग व्यवसाय गर्ने बताए ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. चिरञ्जिवी नेपालले देशभित्र बीमा कम्पनीहरुको विस्तारसँगै ठूलो परिमाणमा पुनर्बिमाको प्रिमियम स्वरुप रकम बाहिरिरहेकोमा त्यो नियन्त्रण हुने उल्लेख गरे । “पुनर्बिमा कम्पनी स्थापना हुनु भनेको अर्थतन्त्र मजबुत हुँदै गएको संकेत पनि हो,” नेपालल भने, “कम्पनीले नेपालमा मात्र सीमित नरहेर विदेशबाट पनि व्यवसाय ल्याउनुपर्छ ।”
पुनर्बिमा कम्पनी उद्घाटन कार्यक्रममा बीमा समितिका अध्यक्ष डा. फत्तबहादुर केसीले रणनीतिक र व्यावसायिक योजनासहित अघि बढ्न सुझाए । “रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनुस् जसले गर्दा कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने सीप तथा ज्ञान भित्र्याउन सहयोगी हुन्छ भने विदेशबाट व्यवसाय ल्याउन सजिलो हुन्छ ।”
त्यस्तै प्राइम लाइफ इन्स्यारेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज कुमार भट्टराईले सरकारको लगानीले कम्पनीको पारदर्शिता र निजी क्षेत्रको सहभागिताले व्यावसायिकता थपिने उल्लेख गरे ।
कम्पनीका अध्यक्ष शोभाकान्त पौडेलले कम्पनीले विदेशबाट समेत व्यावसाय ल्याउनेगरी पुनर्बिमा कम्पनीले काम शुरु गर्ने बताए ।